မသက်ဇင်: နှင်းဆီနီ ပွင့်ဖတ်ပေါ် က ပျားရည် တစက် နှင့် အရိမဒ္ဒန ( ၁၁ )
နှင်းဆီနီ ပွင့်ဖတ်ပေါ် က ပျားရည် တစက် နှင့် အရိမဒ္ဒန ( ၁၁ )
ကျမတို့ နှစ်ဦး ဒုတိယ အကြိမ် ၊ ပုပ္ပား သို့ ထပ်ရောက် ခဲ့ ပါသည်။ စိမ်းစိုနေသည့် ပုပ္ပား ၏ သဘာဝ အလှများ အား ငေးမောရင်း ကျမ သူ့ အား မေးခွန်းတွေ မေးနေမိသည်။ သူ စိတ်ရှည် စွာ ရှင်းလင်းပြောပြသည်။
ရှေးတုံးက မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ မူလ ပထဝီ အနေ အထားက အခုလို မဟုတ်ဘူး လို့ သဘာဝ ပထဝီ ပညာရှင်ကြီး ဖြစ်တဲ့ ဒတ်ဒ လီစတမ့်မ် က ရေးသား ခဲ့တယ် မ ရဲ့မန္တလေး အထက်ပိုင်း ဧရာဝတီ မြစ်ညာဟာ အရင်က စစ်တောင်းမြစ်နဲ့ တဆက်ထဲ ဖြစ်တယ်တဲ့ ၊ ချင်းတွင်း မြစ်ဟာလည်း အခုလို ဧရာဝတီနဲ့ မပေါင်းဆုံသေးပဲ သူ့ဟာသူ သီးသန့်ပင် လယ်ထဲ ကို စီးဆင်းတယ် ၊ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဆိုတာလည်း အဲဒီတုံးက မပေါ်သေးဘူး။ ပြည် မြို့ အနီး တဝိုက်မှာ ပင်လယ်တိမ် တခု ရှိခဲ့တယ် တဲ့ ၊ နောက်ပိုင်း ပုပ္ပား မီးတောင် ပေါက်ပြီး မြေလွှာတွေ ပြောင်း လဲ လာတယ် စစ်တောင်းမြစ်က ရေစီး ပြတ် တယ် ၊ ချင်းတွင်း မြစ်နဲ့လည်း အခု လိုပေါင်းဆုံ သွားတာ တဲ့ ၊ အင်း ဧရာဝတီနဲ့ ချင်းတွင်းပေါင်းပြီး အဲဒီ မြစ်ကြောင်းတွေက ပါလာတဲ့ မြေနု တွေဟာ ၊ အနှစ် တရာမှာ မြေသား သုံးမိုင် ခန့် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ ၊ ရာစုနှစ် များလာတော့ ပြည်မြို့ အောက်ပိုင်းမှာ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ကြီး တဖြေးဖြေး ပေါ်လာတာတဲ့ ၊ မ ရေ မ ကို ကမ္ဘာ့သမိုင်း အနဲ အကျဉ်း ရှင်းပြချင်တယ်
သမိုင်း ပညာရှင် တွေက လူ့သမိုင်း ကို ကျောက်ခေတ် ၊ ကြေးခေတ် ၊ သံခေတ် ၊ စက်မှုခေတ် ဆိုပြီး ပိုင်းခြား ခဲ့တယ် ၊ လူတို့ တည်ထွင်ခဲ့ကြတဲ့ လက်နက်တွေကို ကြည့်ပြီး ယဉ် ကျေးမှု အဆင့်ကို လည်း ပိုင်းခြား သတ် မှတ် တယ် ၊ ၁၉၃၉ ကနေ ၁၉၄၅ ခုနှစ် အထိ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ကြီး အပြီး မှာ သိပ္ပံ ပညာရပ် တွေ အနုစိပ် လာကြတယ် ၊ အသေး ငယ်ဆုံး ရုပ်နုလေး ဖြစ်ကြတဲ့ အနုမြူနဲ့ အခြေခံ အမှုန်များ အ ထိ ၊ စကြဝဌာ တခု လုံး လက်တဆုံး နှိုက် လာ ကြတယ်
လက်နက် ဖန်တီး မတီထွင်မီ ကာလပိုင်းကို သမိုင်း မတိုင်မီ ခေတ် လို့ သတ်မှတ်ကြတယ် ၊ အချို့ သမိုင်း ပညာ ရှင် များက ထပ်မံ ပိုင်းခြားခြင်း ပြုတယ် ၊ သမိုင်း ပညာရှင် ဂေါ်ဒွင်ချိုင်း က သမိုင်း မတိုင်မီ ရှေး လူဟောင်းများ အနက် မီးကို ကောင်းစွာ ချုပ်ကိုင် စေ နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ၊ ယူဆ တယ် ဆိုပြီး ပီကင်းလူက စ ပြီး စာရင်းသွင်းကြတယ်
မနုသဗေဒ ပညာရှင် အများအပြားက ပီကင်းလူဟောင်းရဲ့ သက်တမ်းကို အနှစ် ငါးသိန်း ပတ်ဝန်းကျင် လောက် က လို့ ခန့် မှန်းကြ တယ် ကျောက်ခေတ်ကြီး တစ် ခေတ်လုံး ကို နှစ်ပေါင်း လေးငါးသိန်း ကြာမျှ ဖြတ်သန်း ကျော် လွား ခြင်း ပြုကြရတယ်လို့ လည်း ဆို တယ် ၊ ကျောက်ခေတ်က နေ ကြေးခေတ် တက်လှမ်းခြင်း ပြုနိုင် တော့ မှ လူ့ သမိုင်းကိုစတင် တယ်လို့ ဆိုကြ တယ်
ကြေးခေတ်ကို ကြေးနီခေတ် နဲ့ ကြေးဝါခေတ် လို့ လည်း သမိုင်း ပညာရှင် တွေ က ခွဲခြားကြ တယ် နိုင်းလ် ၊ ယူဖရေးတီး ၊ တိုက်ဂရစ် ၊ အိန်ဒု ၊ မြစ်ဝါ နဲ့ ကမ္ဘာသစ် အလယ်ပိုင်း အရပ် ဒေသ များ တစ်ဝိုက်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ပေါင်း ခုနစ်ထောင်ခန့် က ကြေးခေတ် ယဉ် ကျေး မှုဆိုင်ရာ လူ့ အဖွဲ့အစည်းများ တည်ထောင်ခဲ့ကြတယ် ၊ အီဂျစ် ၊ ဆူမေးရီးယား ၊ ဘာဘီလုံ ၊ အဆီး ရီး ယား ၊ ချော်ဒီ ၊ မိုဟန်ဂျိုဒါရို ၊ ဟာရပ ၊ တရုတ် ၊ အင်ကာ ၊ အဇတစ် ၊ မာယာ ၊ တို့ ဟာ ကြေးဝါ ခေတ်က ကြီးကျယ် ထင်ရှားခဲ့တဲ့ မြို့ပြနိုင်ငံ နဲ့ အင်ပါယာကြီးများ ဖြစ်ခဲ့ တာပေါ့။
အဲဒီ နောက် သံခေတ်ကို တက်လှမ်းခဲ့ကြတယ် ၊ မြေထဲ ပင်လယ်ဒေသ ၊ ဥရောပ ၊ အိန္ဒိယ ၊ တရုတ် ၊ တို့ ဟာ နှစ် ပေါင်း သုံးထောင်ခန့်လောက်က သံခေတ် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းရာ အရပ် ဒေသ များ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ၊ ပါရှင်း ၊ ခေါမ ၊ ရောမ ၊ မောရိယ ၊ ချင် ၊ ဟန်မင်းဆက် ၊ အင်ပါယာကြီး တွေဟာ ထင် ရှား ခဲ့ကြ တာပေါ့ ၊ စက်မှုခေတ် ယဉ်ကျေးမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ပေါ်ထွန်းလာတာ ကြေးခေတ် သံခေတ် နဲ့ နှိုင်းစာ လိုက်တော့ ဘာမှ မကြာလှသေးဘူး စက်မှု တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်ဖြစ် တဲ့ ဗြိတိန် နိုင်ငံကို စံ ထား ရရင် နှစ်ပေါင်း၂၀၀ ကျော် လောက်သာ ရှိလိမ့်ဦးမယ် ၊ ၁၈ ရာစု ၊ ၁၉ ရာစု ၊ ၂၀ ရာစု များ အတွင်း ဥရော ပ ၊ မြောက် အမေရိက ၊ အာရှအရှေ့ဖျား အရပ်ဒေသ များ မှာ ပေါ် ပေါက် ခဲ့တယ် ၊ ဗြိတိန် ၊ ပြင်သစ် ၊ ဂျာမနီ ၊ ရုရှ ၊ အမေရိကန် ၊ ဂျပန် တို့ဟာ ကြီး ကျယ် ထင်ရှားတဲ့ စက်မှု နိုင်ငံ ကြီး များ ဖြစ်ကြ တယ်
အချို့ နိုင်ငံတွေဟာ ၊ သံခေတ် ယဉ် ကျေးမှု အဆင့်ကနေ တက်လှမ်းခြင်း မပြုနိုင်ကြသေးဘူး ၊ အချို့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ ကျောက်ခေတ် ယဉ်ကျေးမှု အဆင့် မှာပဲ ကြွင်းကျန်လျက်ရှိကြဆဲပဲ သြစတေး လီး ယား တိုက် ငယ် ၊ နယူးဂီနီကျွန်း နဲ့ ကမ္ဘာ့ချောင်ကြို ချောင်ကြား တွေ မှာ ရှေး ဟောင်း လူ့ အဖွဲ့ အစည်းများ ကို တွေ့ မြင်နေရဆဲဖြစ်တယ် ၊ ခေတ်သစ် သမိုင်းပညာရှင်များက ကျောက်ခေတ်ကို ရှေး ခေတ်ဟောင်း လူရိုင်း ခေတ်လို့ အမည်ပေးပြီး ၊ ကြေးခေတ် ကို ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ရှင်များခေတ် ၊ သံခေတ်ကို ပဒေသရာဇ် မြေရှင် ခေတ် ၊ စက်မှုခေတ်ကို အရင်းရှင် ဆိုပြီး ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ကြတယ်
၂၁ ရာစု သမိုင်းပညာရှင်များက ၂၀ ရာစု ရဲ့ သမိုင်းကို ပြုစု ရေးသားကြတဲ့ အခါ ဘယ်လို ၊ မှတ်တမ်းတင် ကြမှာလဲ ၊ ဒီနေ့ ခေတ် ဟာ ၊ ညူကလီးယားခေတ် ၊ အာကာသကို အောင်နိုင်သောခေတ် ၊ စက်ဦးဏှေက် ကွန်ပြူတာတွေ ၊ ထွန်းကား တဲ့ ခေတ် ၊ တနည်း အားဖြင့် အနုမြူ အာကာသ စက်ဦးနှောက် ကွန်ပြူတာ များ ကို ပေါင်းစည်းထားသော ခေတ်ကြီး တစ် ခေတ် ဖြစ်တယ်ပေါ့ ၊ ညူကလီးယား စွမ်းအင်ဘီလူးကြီးများကို သိပ္ပံ ပညာရှင် တွေ က ထုတ်ယူ နေကြတာဖြစ်တယ်
ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ်ပွဲကြီးအတွင်းက ရန်ဘက် ဖက်ဆစ် ၀င်ရိုးတန်း မဟာမိတ် အဖွဲ့ကို တွန်းလှန် တိုက် ခိုက် ရန် ဆို တဲ့၊ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာ အနုမြူဗုံး လျှို့ဝှက် စီမံကိန်း ပြုလုပ်ခဲ့ တယ် ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ ၊ ရူပဗေဒ ၊ ဓာတုဗေဒ သိပ္ပံပညာ ရှင်များကို တာဝန်ပေးခဲ့ကြတယ်
၁၉၄၅ နှစ် သြဂုတ်လ ခြောက်ရက်နေ့ မှာ တီအင် တီယမ်းအား တန်ခြေ၂၀၀၀၀ ခန့် ယူရေနီယမ် အမျိုးအစား ဗုံးတစ်လုံးကို လူဦးရေ လေးသိန်းခွဲ ရှိတဲ့ ဟီရိုရှီးမား မြို့ ပေါ်ကို ကြဲချ လိုက်တယ် နောက်၃ ရက် အ ကြာ သြဂုတ် လ ကိုးရက် နေ့ မှာ အလားတူ ယမ်းအားရှိ တဲ့ ပလူတိုနီယမ်ဗုံး တစ်လုံးကို လူဦးရေ သုံးသိန်းရှိ တဲ့ နာ ဂါ ဆာကီ မြို့ပေါ် ကို ကြဲချ လိုက်ပြန်တယ်။ ဟီရိုရှီးမား မြို့သူ မြို့သား တစ်သိန်း ကျော် အသေဆိုး နဲ့ သေဆုံးတယ် တစ် သိန်း ကျော် လောင်မီးကျ ပြီး မရှုမလှခံကြရ တယ် ၊ နာဂါဆာကီမြို့သူမြို့သား ၇၀၀၀၀ ကျော်သေဆုံး ပြီး ၇၀၀၀၀ လောင်မီးကျခံရတယ် မြို့ကြီးနှစ်မြို့လုံး ပျက်စီးသွားပြီး အနုမြူခေတ် ရဲ့ ပွဲဦးထွက် ကြိုဆိုလိုက် တာ ပေါ့
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး မဖြစ်ပွား ခင် နှစ်ကာလ ကတည်းက နိုင်ငံတကာက သိပ္ပံပညာရှင် များ ဟာ အနုမြူဒတ်စင် များအတွင်းမှာ ဧရာမ စွမ်းအင်တွေ ရှိ ကြောင်းကို သိရှိထား ပြီးပြီ လေ ရူသာဖိုဒ့် ၊ အိုင်းစတိုင်း ၊ နီအယ်ဗိုလ် ၊ ဟိုင်ဆင်ဘတ် ၊ ဟာမီ ၊ ဂျိုးလိယော့ဂျိုရီ ၊ ဟမ်း တို့ ဟာ ညုကလီးယား စွမ်းအင် သိပ္ပံပညာရှင် များဖြစ်တယ် ညူကလီးယား စွမ်းအင်ကို အဖျက် လက်နက် အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ စတင်ကြံစည် ကတည်းက သိပ္ပံပညာရှင် တော်တော် များ များ က ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ် ဒါပေမယ့် ၂၀ ရာစုဟာ အမေရိကန် ရာစု ဖြစ်ရမယ်လို့ ကြွေးကြော် ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အစိုးရဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ သတိပေး ချက် ကို အလေး မထားဘဲ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ကြီးဆုံးပြီးနောက်မှာ ညူကလီးယား လက်နက်များ တိုးတက်အောင် စမ်းသပ် ခဲ့ကြတယ်
ညူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံ တွေကို အကြမ်းဖျဉ်း ပြောပြရရင်
ရုရှား ၊ ၇၂၀၀ မှ ၁၆၀၀၀
အမေရိကန် ၊ ၅၇၃၅ မှ ၉၉၆၀
ပြင်သစ် ၊ ၃၅၀
အဂ်လန် ( ယူကေ ) ၂၀၀
အိန္ဒိယ ၊ ၁၂၀ မှ ၂၀၀
အစ္စရေးလ် ၊ ၇၅ မှ ၁၇၀
တရုတ် ၊ ၁၃၀
ပါကိစ္စတန် ၊ ၃၀ မှ ၉၂
အဲ လောက် ထိ ပိုင်ဆိုင် ထားကြတယ် ၊ အင်း အခု တော့လည်း အီရန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား တွေ က တော့ စမ်းသပ် နေဆဲ ပေါ့ မ ရယ် မ ပြောတဲ့ ကဗျာ ဆရာမလေး အိန္ဒြာ ရဲ့ ကဗျာလေး လိုပေါ့
သူ လေးပင်စွာ ပြောခဲ့သည် အားပြိုင်မှုတွေ ခြိမ်းခြောက် မှု တွေ နဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ စိုးရိမ် ထိတ်လန့် စရာ တွေ အပြည့်ပါ ပဲ တဲ့ လေ
ကျမ ရင်ထဲက ၊ တိုးတိုးလေးရွတ်ဆို နေမိသည်ကား
လူ့ ဘဝ တွေ အမုန်းတရားတွေ
ကမ္ဘာကြီးမှာ အသက် ရှင်
စက္ကန့် နှင့် အမျှ စိုးရိမ်ပူပင်
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း ငြီးညူသံ တွေ
ရှင့် ပညတ် နဲ့ ပရမတ်
ကမ္ဘာ ကြီးလဲပြိုအစိုးရိမ်တွေ ပို
မငို ပါ နဲ့ လူသားတို့
Posted by မသက်ဇင် at 11:57 AM
စောစောစီးစီး သမိုင်းဆရာမဆီမှာ ပထမဆုံး ဝင်ရေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ပုပ္ပါးအကြောင်းတော့ သိပ်စိတ်မဝင်စားမိဘူး။ (မြန်မာအစပုပ္ပါးက ဆိုတာရော အဟုတ်ပဲလားဟင်) ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားအကြောင်းတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာက ကိုရီးယားတွေဟာ တရုတ်ပြည်ကနေ ထွက်သွားတဲ့ တရုတ်တွေပဲလို့ ဆိုကြတယ် အဲဒါရော အမှန်ပဲလား အမ။ ဂျပန်တွေကလည်း တရုတ်မျိုးရင်းတွေပဲတဲ့။ ပြီးတော့ သစ်ခွမုဆိုး ကင်းဒန်းဝဒ်ကိုလည်း ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ထည့်ပေးပါလို့
ဗဟုသုတတွေ အသိတွေအများကြီးရတဲ့ အခန်းဆက်ပိုစ့်လေး
1:02 PM PDT
ဒီတစ်ခါတော့ သိပ်နောက်မကျတော့ပါဘူး တင်တင်ချင်း မဟုတ်လိုက်ပေမယ့် ခဏချင်း ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ... ဒီပို့စ်တင်မယ့် အချိန်ကို စောင့်နေခဲ့တာလေ ... စောင့်ရကျိုးနပ်ခဲ့တာပေါ့ .... ကျေးဇူး အစ်မ
1:13 PM PDT
အစ်မရေ ပုပ္ပါးကနေ အနုမြူထိ ဆွဲခေါ်သွားတယ်နော်... မှတ်သားစရာပါ....
အလည်လာရတာ အတော်အကျိုးရှိပါတယ်။ ဗဟုသုတစုံတယ်။ ကြိုက်တယ်။
အလည်ရောက်တယ် --မသက်ဇင် လင့်ခ်ပြောင်းလိုက်ပီနော် အလည်လာအုံး ဟီး
6:13 PM PDT
နူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံ တွေကိုအကြမ်းဖျဉ်း ပြောပြရရင်--ထဲ မှာ...
များမကြာမှီ မြန်မာ လည်းပါတော့မယ်လေ...
6:14 PM PDT
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အခန်းဆက် ခရီးသွား ဆောင်းပါးကို လာဖတ်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ
"ကျမ ရင်ထဲက--တိုးတိုးလေးရွတ်ဆို နေမိသည်ကား---
လူ့ ဘဝ တွေ--အမုန်းတရားတွေ--
ကမ္ဘာကြီးမှာ အသက် ရှင်---
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း ငြီးညူသံ တွေ--
ရှင့်--ပညတ် နဲ့ ပရမတ်-
ကမ္ဘာ ကြီးလဲပြို--အစိုးရိမ်တွေ ပို--
သြော် မငိုပါနဲ့ လူသားတို့..
ဘ၀မှာ ဘာက အရေးအကြီးဆုံးလည်းဆိုတာ ဖွဖွလေး မေးသွားတယ် နော်။
မြန်မာအကြောင်းလေးပြောရင်း ကမ္ဘာဆီ ဆွဲခေါ်သွားလို့..
ကျနော်အများကြီးနောက် ကျပြီး မှရောက် ခဲ့ ပါတယ်။ ကောင်း တယ် ဗျာ သုတ ရော ရသ ပါ ပါ အောင် ရေးနိုင်တဲ့ အတွက် စာဖတ် သူတွေ အတွက် အကျိုး များ ပါတယ် ဗျ။
လေးစား စွာ ဖြင့် ဥပသကာ
အမရေ .. စာပေများ လာရောက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ် ..တကယ်ကို ဗဟုသုတ ရစေတဲ့ စာပေတွေပါ ..ဆက်လက်ရေးသားမှုများကို မျှော့်လင့်နေပါတယ် ..
12:56 PM PDT
မသက်ဇင်ရေ သိပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပါတယ်။ သုတတွေ ပိုများလာလို့ ကျွန်မသိထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ မှတ်ချက်ရှည်ရှည် ရေးချင်ပေမယ့် အခု အချိန်မရလို့ နောက်အချိန်ရမှပဲ ပြန်လာရေးတော့မယ်။
မသက်ဇင်ရေ ကျနော့်ကွန်မန့်ဘောက်က တမျိုး။ Hide လုပ်ထားလို့ပါ။ အကုန်ရောက်လာပါတယ်။ ကျနော်က ရွေးပြီး Publish လုပ်တာမို့ပါ။ ရေးသာရေးလိုက်ပါ။
10:53 PM PDT
ခေတ်အဆက်ဆက်က အဖြစ်အပျက်လေးတွေ ကို အကျဉ်းချုံးပြီး လိုရင်းတိုရှင်း နဲ့ မနှစ်မြို့ ဘွယ်ရာ စစ်ပွဲ တွေ အကြောင်း ရေးထားတာ ပညာသားပါတယ် နော် ..
ဒီနေ့ မှ အချိန်လေး အေးဆေးရှိနေလို့ခုမှ မန့်ရတယ်။နေ့ တိုင်းလို တော့ရောက်ဖြစ်တယ် ။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေနော် ..
တီတီရေ... ကဗျားလေးကို ကြိုက်တယ်...
တီတီရေးတဲ့ ပို့စ်တွေက ဗဟုသုတ တွေ အများကြီး ပေးစွမ်းနိုင်တယ်... မက်မက်လည်း အားတာနဲ့ ပြေးလာပါတယ်.. အခု အိမ်ပြောင်းနေရတာရယ် လူမှုရေး ပြသနာ နဲနဲရယ် မိသားစုပြသနာရယ် ဖြေရှင်းနေရတာမို့ မရောက်ဖြစ်တာပါတီတီ....
အင်း... ကမ္ဘာကြီးကို တချို့လူသားတွေလုပ်ချင်ရာလုပ်၊ တချို့လူသားတွေက ကယ်တင်၊ တချို့က မှတ်ကျောက်တင်... အင်း... ဘယ်တော့ ဆုံးမလဲမသိဘူးနော်...
စကားမစပ် အစ်မရေ... သူများရေးထားတဲ့ သမိုင်းပုံပြင်လေးတစ်ခုကို ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ဆားချက်ထားပါတယ်။ လာရောက် ခံစားပေးပါဦးဗျို့။
8:20 AM PDT
မငို ပါ နဲ့--လူသားတို့--
မှန်ပါတယ် ၂၀၁၀ မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်လည်းပြောနေကြတယ်
သောင်တင်နေတဲ့ ခရုလေးတွေ အကုန်လုံးကို ပင်လယ်ထဲ မချပေးနိုင်ပေမဲ့ ကယ်သူနဲ့ ကြုံတဲ့ ခရုလေးအတွက်ကတော့ နည်းတဲ့ သုခလား အစ်မရယ်။
အစ်မရေ နောက်ကျစွာလာဖတ်သွားပါတယ် ။ သီချင်းလေးကိုလဲ လိုက်ဖက်စွာ ခံစားသွားပါတယ် ။
2:43 PM PDT
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်လေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ .. :-)
လူသားအချင်းချင်းမေတ္တာစိတ်လေးတွေနဲ့ နေနိုင်ရင် ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲလို့...
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာပါစေ..
လာလည်ပါတယ်.. ပျော်ရွှင်စရာ သင်္ကြန်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ... မအားလို့ အခုမှ စာတွေလာဖတ်ရတယ်...
ချက်ခြင်း ပြန်လာနှုတ်မဆက်နိုင်ခဲ့တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်...
cbox မတွေ့လို့ ဒီမှာ စာရေးခဲ့ပါတယ်... ပျော်ရွှင်ဖွယ် မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ...
စာတွေဖတ်သွားတယ် မမရေ သင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
9:03 PM PDT
10:20 PM PDT
လောင်းတယ်ကွာ................... ရေလောင်းတယ်...........ရေလောင်းတယ်..... မပြေးနဲ့........ရော့....ရော့
မပြေးနဲ့ဦး............ တော်ပြီကွာ... အိုးမည်းပါသုတ်မယ်............ အားမရတော့ဘူး ရေကန်ထဲကို
တွန်းချတယ်ကွာ.............. ကဲ သွားပေရော့လဟယ်................ ဗွမ်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဗွမ်..
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ မသက်ဇင် ... ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ ခင်ဗျာ ..
Happy new year! I wish you all the best in every year.
ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ၊ အနှစ်သာရရှိရှိ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ၊ ပညာရှိရှိ၊ သုတရှိရှိ၊ ရသရှိရှိ၊ ဗဟုသုတရှိရှိ၊ ယုံကြည်မှု ရှိရှိဖြင့် ရေးသားတင်ပြထားတဲ့ ဘလော့ဂ် လေး တစ်ခုပါလားနော်၊ အားပေးလျက်ပါ
3:41 PM PDT
သီချင်းနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်တယ်နော်။ ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မမ။
စကားမစပ်၊ အကျနေ့ရောက်ပြီနော်။ ရေလာပက်တာ။ ဟိ ဟိ၊ ရေပူဖောင်းနဲ့။ ပြေးပြီ။
ဘလော့လည်ရင်း၊ ဖတ်ရင်း၊ ရေပါလောင်းခဲ့ပါကြောင်း... (((( ဗွင်း))))))
ပိတောက် ခက်နဲ့ နံသာရေ လာပက်ပါတယ် .. ပြုံးတော်မူပါ အစ်မတော်...
တီတီဇင်ရေ.... ပထမ လာတုန်းက ဗီဒိုယိုဖိုင်လေး မရှိဘူးနော်.. အခု ကြည့်သွားတယ်... သီချင်းလေးကို နာဆင်သွားတယ်..
တခါတည်း တီတီဇင့်ကို ရေပါလောင်းသွားတယ်နော်.. အာဝါးး လဲပေးခဲ့တယ်.......... ခစ်ခစ်
အိမ်မှာ မုန့်လုံးရေပေါ် လုပ်လို့ လာပို့တာ....
12:02 AM PDT
ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေဗျာ .. ;-)
3:23 AM PDT
7:08 AM PDT
ရောက်လာတယ် အမရေ.. သင်္ကြန်မှာ ပျော်ပါစေကြောင်း
သင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ နှစ်သစ်မှာ အောင်မြင် အေးမြပါစေ၊ လာရောက် လည်ပတ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
8:06 AM PDT
aung oo said...
ဘ၀တလျောက်လုံးမှာလည်း ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆန္ဒများ ပြည့်ဝနိုင်ပါစေ...
မရောက်တာလဲ ကြာပြီ။ မတွေ့တာလဲ ကြာပြီ။
အမအတွေး၊ အမအရေးတွေကို ပြန်ဖတ်ခွင့်ရတာ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ။ ငါ့အမကြီး နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ပါစေ။
မသက် ဇင်ရေ ရေ လာ လောင်းတယ် ။ ကြည်သာအေး မျှရှိ ပါစေ။
စာတွေလာဖတ်ရင်း နောက်ဆုံးနေ့မှာ ရေလောင်သွားပါ တယ်ခင်ဗျာ :)
7:44 PM PDT
မသက်ဇင်ကသာ မိတ်ဝတ်မပျက် လာနေခဲ့ပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ မသိဆိုးရွားစွာ အသွားအလားကျဲနေခဲ့တာကို တလေးတစား တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ။ နှစ်သစ်မှာ ချမ့်မြေ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ။
မမသက်ဇင်..စီဗုံးမတွေ့ လို့ ဒီနေရာမှာဘဲအော်ခဲ့ရတာ ..မန့် ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်လို့ အားတော့နာပါရဲ့ .ရှေ့ မှာတခါတော့မန်ပြီးသွားလို့ ။ဒီနေ့ တော့ နောက်ဆုံးသင်္ကြန်တရက် .ရေလာပက်တာပါ ။ပိုအေးအောင် ရေခဲရေနဲ့ဘဲပက်တယ်နော် ။နှစ်သစ်မှာအေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
မကြီးရေ မင်္ဂလာပါ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်ကူးလေးဖြစ်ပါစေ လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝပါစေလို ဆုလာတောင်းပေးပါတယ်
9:36 PM PDT
11:21 PM PDT
စီဘုံးမတွေ့လို့ ဒီမှာပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်...
သင်္ကြန် နောက်ဆုံးနေ့ ရေခဲရေ အေးအေးလေးနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးရွှဲအောင်လောင်းလိုက်တယ်... ဟဲ ဟဲ... နောင်နှစ်မှာ ပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါစို့...
အစ်မကို ရေလာလောင်းတာ.. ဗွမ်း... ဗွမ်း.... နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ...
3:49 AM PDT
4:15 PM PDT
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ (မ)သက်ဇင် ၊၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ၊၊
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါခင်ဗျာ။ မမ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။ အခုလို စာတွေကိုလဲ နောင်အများကြီးရေနိုင်ပါစေခင်ဗျာ...
12:28 AM PDT
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ မသက်ဇင်..ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အားလုံး အလွန်ပဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်..
လာလည်သွားတယ် သမိုင်းဆရာမရေ :)
11:52 AM PDT
ဆရာက ခရီးသွားယင်းလေဆိပ်မှာ စာအုပ်တအုပ်လောက် ၀ယ်တတ်တယ်။ အဲ့ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလေးပါရင်ပေါ့။ ဒီတခေါက်တော့ သန့်မြင့်ဦးရဲ့စာအုပ်ဝယ်ခဲ့တာ အခုဖတ်နေတယ်။ ဒီစာအုပ်က မထွက်ခင် စာအုပ် (ရီဗျူး)ကတည်းက ဆရာနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ အတော်စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာ။ သူ့ကိုဖိတ်ပြီးတောင် စကားပြောခိုင်းသေးတယ်။ ဆရာရောက်ပါတယ်။ သူနဲ့ အစ်ရှူးတခုမှာ ငြင်းခဲ့ဖြစ်သေးတယ်။ မသက်ဇင် ဖတ်ပြီးပြီလား။ ပြောပါအုံး။
7:43 PM PDT
မမရေ ရောက်ပါတယ်ရှင်.. မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံပြီး လိုအင်ဆန္ဒများ အလုံးစုံ ပြီးပြည့်စုံပြီး အောင်မြင်သောဘ၀ကို ရရှိ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေရှင်
ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှ အောင်မြင်ပြီး စာကောင်းပေကောင်းတွေ များများ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
9:55 PM PDT
စိတ်​၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့်တူ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ခရီးလေး အေးချမ်း သာယာပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်-
နှစ်သစ်ရဲ့ ပထမဆုံးမသက်ဆီ အလည်ထွက်ခဲ့ပါတယ် စာတွေအရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ-
လူတစ်ခုပူမှုရယ်တဲ့ ဆယ်ကုဌေတဲ့ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျနော်လည် ဘာမှဆက်မလုပ်ဖြစ်တာပါ၊ အခုကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပြန်သွင်းနေတယ်(ကီးထည့်နေတယ်) မသက်ကိုအားကျတယ်-
9:44 AM PDT
အခုတော့ စာမဖတ်ဖြစ်သေးဘူး.. နောက်မှ အေးဆေးဖတ်တော့မယ်.. အမလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ...
1:17 AM PDT
ကွန်တွေတအားကျနေလို့ လာမလည်ဖြစ်တာနားလည်ပေးပါနော် အဟဲ မြန်မလာပြည်လေ သိတယ်ဟုတ် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
အမရေ ကျနော် လာပါတယ်၊ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ လာနှောင့်ယှက်နေတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့ အမရယ်.. သူ့လမ်း သူလျှောက်တတ်မှာပါ.... နှစ်သစ်မှာ အဆင်ပြေပါစေ။
ဆဲစာ လာရေးတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ
နင်တို့ မနာလိုတာ သိသာထင်ရှားလွန်းတယ်
အဆဲခံရတဲ့ မသက်ဇင်က ဘာမှ ဖြစ်မသွားဘူး
ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်းသူက တိုက်ခိုက်
သူ့ ပိုစ့်ကို မကျေနပ်ရင် အမည်ရင်းနဲ့
ထမိန်ခြုံ ထဲက လက်သီးမပြနဲ့
Somebody quit from following me. So sad :(
6:59 PM PDT
၁)စာပေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကအစဉ်တစ်စိုက်ရပ်တဲ့ ဆရာဒဂုန်တာရာ စာရေးဆရာအနေနဲ့ မြင်တွေ့လိုတယ်။
၃)ယခုဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ အစ်မငယ်မ၀င်ဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်။ (တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုပါနဲ့)
ဒီနေ့ ရန်ကုန် ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း... လာလည်တာ၊ အစ်မဆီလည်း မရောက်တာ တော်တော် ကြာသွားပြီ။ နေကောင်းတယ်နော်. . . ပိုစ်အသစ်လေးတွေ တွေ့ရလို့ ကျန်းမာနေတယ်လို့ ထင်တယ်။ သင်္ကြန်မှာ ပျော်ခဲ့လား၊ ကျွန်တော်ကတော့ အညာသင်္ကြန်မှာ ပျော်ခဲ့တယ်။
အစ်မ မှာတဲ့ မုံရွာ ၀က်အူတောင့်လေ. . .
ကားခ မလောက်လို့ ရောင်းစားလိုက်ရတယ်... ဟီး ဟီး... :D
့့့  ????
ထ ကြည့်ရင် အိပ်ရေးပျက်မယ် အစ်မ
အစ်မသက်ဇင် ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ :)
3:42 AM PDT
မှတ်သားစရာတွေ ချည်းပါပဲလား အစ်မရေ ။ အရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ် ဖတ်ရတာ ။
သီချင်းကိုဖွင့်ပြီးမှ တစ်ချို့နေရာတွေ ပြန်ဖတ်နေသေးတယ်။
စက္ကန့်နှင့် အမျှ စိုးရိမ်ပူပင်အင်း.. တွေးချင်စရာ၊ မှတ်သားစရာလေးပါ။
ဘယ်သွားနေလဲ အရိမဒ္ဒနအကြောင်းတွေ ထပ်မရေးတော့ဘူးလား။ ကျနော်တို့ စောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတာ မေ့နေပြီထင်တယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ အမ။
4:51 PM PDT
အလုပ်တွေ များနေလား.. အသစ်တွေ စောင့်နေတယ်နော်
3:53 AM PDT